​बसको ठक्करबाट आमाको मृत्यु, छोरी घाइते
१४ मङ्सिर २०७५
राजविराज । राजविराज–रुपनी सडकखण्डमा बसको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ । राजबिराजबाट रुपनीतर्फ जाँदै गरेको ना१ज ८१०३ नंको म्याजिक बसले पैदलयात्री स्थानीयवासी ३८ वर्षीया प्रमिलादेवी पासवान र उनको साथमा रहेकी १४ महीनाकी छोरी प्रबती कुमारीलाई ठक्कर दिँदा दुवै जना घाइते भएका थिए । ठक्करबाट गम्भीर घाइते प्रमिलाको रुपनीस्थित युनिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा राति मृत्यु भएको र छोरी प्रबृतीको उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको… विस्तृत समाचार
​१३ वर्षीया किशोरीद्वारा आत्मदाह
राजविराज । सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–४ स्थित जगतपुरमा एक १३ वर्षीया किशोरीले आत्मदाह गरेकी छन् । स्थानीय महेश चौधरीकी १३ वर्षीय छोरी अञ्जनी चौधरीले आफ्नै शरीरमा मट्टितेल छर्किएर आगो लगाएर मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी निरीक्षक प्रतीक बिष्टले बताएका छन् । आमासँग विवाद हुँदा बुधबार साँझ अञ्जनीले शरीरमा मट्टितेल छर्किएर आगो लगाई आत्महत्याको प्रयास गरेकी थिइन् । आगोबाट अञ्जनीको शरीर जलेर घाइते भएकी उनको… विस्तृत समाचार
​चालु आवभित्र निजी आवासको पुनर्निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले चालु अर्थिक वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छ । संघीय संसदको विकास समितिको बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले अनुदान सम्झौता गरेका मध्ये ७७ प्रतिशत (७ लाख २७ हजार १ सय २३) ले निजी आवास पुनर्निर्माण भएको र त्यसमध्ये ४३ प्रतिशतले निर्माण सम्पन्न गरेको जानकारी दिए । उनले गुनासो सुनुवाई, एकीकृत बस्ती,… विस्तृत समाचार
​न्यायालय मर्यादित हुनुपर्छ : महान्यायाधिवक्ता
विराटनगर । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले न्यायालयलाई मर्यादित बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । विराटनगरमा बुधबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई विकृति, विसंगतिरहित एवं व्यावसायिक संस्थाका रुपमा अघि बढाउने कार्य सुरु भएको बताए । महान्यायाधिवक्ता खरेलले सरकारले काम गरेबापत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिएकाले अनियमितता र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारी सेवा सुविधा कम भयो भनेर गैरकानूनी काम गर्नेलाई कानूनअनुसार… विस्तृत समाचार
बाँदरले बस्ती नै उठायो !
भोजपुर । ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ भन्ने नेपालीमा एउटा भनाइ नै छ । यो भनाइ त्यतिकै बनाइएको पक्कै होइन जबकि बाँदरको चक्कचक्कका कारण यहाँको एउटा बस्ती नै विस्थतापित हुनु परेको छ । बाँदरको आतंक बढेकै कारण भोजपुर रामप्रसाद राई गाउँपालिका–४ दलगाउँका स्थानीयबासी समस्यामा त परेका छन् नै, बाँदरले बस्तीमा पसेर अन्नबाली खान थालेपछि कतिपय स्थानीय विस्थापितसमेत भएका छन् । बाँदरले बस्तीमा पसेर दुःख दिन थालेपछि गाउँका… विस्तृत समाचार
उपहार र नगद नलिन झापाली ​पत्रकारलाई आग्रह
दमक । समाचार सम्प्रेषणका नाममा प्रदान गरिने कुनै पनि उपहार, नगद वा अन्य खर्च नलिन झापाली पत्रकारलाई आह्वान गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, झापा शाखाले यस्तो आव्हन गरेको हो । बिर्तामोडस्थित कार्यालयमा बसेको बैठकले पत्रकार सम्मेलनमा दिइने खर्च असान्दर्भिक भएको र यसले विकृत रूप लिएकाले त्यस्तो खर्च नलिन पत्रकारलाई आग्रह गरेको जनाएको छ । बैठकपछि अध्यक्ष तारामणि सापकोटा र सचिव सन्तोष आचार्यले जारी गरेको… विस्तृत समाचार
क्याम्पसले लगाएको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द
काठमाडौं । सानोठिमी क्याम्पसले जग्गा भाडामा लगाएको बिषयमा आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोेखरेलले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै क्याम्पसले लगाएको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । क्याम्पसले विवादित ढंगले जग्गा भाडा लगाएको र एकदमै कम रकममा जग्गा भाडामा दिएको सूचना पाएपछि मन्त्री पोखरेलको ध्यानाकर्षण भएको थियो । जग्गा भाडाको बिषयमा तत्काल एक्सन लिएका मन्त्री पोखरेलले आज मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै जग्गा भाडा सम्झौता… विस्तृत समाचार
​दृष्टिको खवरदारी आवश्यक छ
माधव विद्रोही/झापा । त्यतिबेलाको कुरा हो, परिपक्व तर मिठो स्वरले माधवजी ! दृष्टि छ भनेर कसैले सोध्यो, मैले हेर्दै नहेरी भने सकियो । को रहेछ भनेर टाउको उठाएर हेर्दा अग्लो मोटो शरीर भएको उज्ज्यालो अनुहार भएको मानिस देखे । त्यसपछि मनमनै सोचे दृष्टि साप्ताहिक दिनै पर्ने व्यक्तिजस्तो लाग्यो । तर, चिनेको थिएन । मेरो पसलमा अन्य ३÷४ वटा साप्ताहिक पत्रिका पनि देखाए । उसलाई कुनै… विस्तृत समाचार
झापा । दमक–रवि सडकअन्तर्गत इलामको माङ्सेवुङस्थित भञ्ज्याङ खण्डमा गएराति भएको ट्क्याक्टर दुर्घटनामा परेर चालकसहित दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा पाँचथर इलाम, माङ्सेवुङ गाउँपालिका–३ का २८ वर्षीय नवीन कुरुम्बाङ र सहचालक धनकुटा जिल्ला चौबिसे गाउँपालिका–८ घर भएका २२ वर्षीय गोकुल लिम्बूको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले जनाएको छ । दुर्घटनामा परेर गम्भीर भएका दुवैको दमकस्थित लाइफलाइन अस्पतालमा शुक्रबार बिहान उपचारका क्रममा मृत्यु… विस्तृत समाचार
इलाम । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि चार÷चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । नेकपा इलामले हिजो सोमबार इलाम सदरमुकामस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरेको चियापान तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा खनाल र नेम्वाङले बजेटसहितका ३७ योजना छनोट गरेका हुन् । इलाम क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित खनालले सूर्योदय नगरपालिकामा पूर्वाधार… विस्तृत समाचार